Foloalindahy Tsy voafehin`ny fitondrana intsony
Iray volana nitondran-dRajoelina Mitamberina sahady ny tetezamita
Iray volana katroka anio 19 febroary no nitondrana ny firenena i Andry Rajoelina sy ny ekipany.
Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana “Mila ampitomboina ny tetibola”, hoy i Serge Zafimahova
3% monja amin`ny tetibolam-panjakana no natokan`ny fanjakana ho an`ireo rantsamangaikan`ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.
Fikambanana Nosy Malagasy “Tsy maintsy azo ireo nosy manodidina.”
Nangingina tao ho ao ny fikambanana nosy Malagasy na ANM tarihin’ny filohany, Arlette Ramaroson, izay nitaky ny hamerenana ireo nosy manodidina an’i Madagasikara.
Baolina kitra D-1 any Boeny Mitarika ny Fosa Jr Elite taorian’ny andro faha--7
Taorian’ny andro faha-7 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny baolina kitra any Boeny sokajy D-1 notontosaina tamin’ny sabotsy 16 sy alahady 17 febroary lasa teo tao amin’ny kianja
Any amin`ny HCC ny mason`ny maro, miandry ary mitaky ny fitsarana marina sy tsy mitanila ny amin`ny taratasy fitoriana napetrak`ireo depiote 73 izay mitsipaka ny fandaniana amboletra ny lalàm-pifidianana sy ny fangatahan`izy ireo ny fametraham-pialan`ny filohan`ny Repoblika.
Etsy an-daniny, efa manahy ny tsy hahafehy ny fitsarana intsony ny fitondrana HVM dia misy amin’izao fotoana miaramila mitetika hanambitamby ireo namany an-dakazerina indray. Hasaina hiteny sy hiaro ny filoham-pirenena izy ireo fa tokony hamita ny fotoam-piasany izy. Hatreto, tsy araka ilay fanambarana nataon`ny Foloalindahy ny 2 mey lasa teo izay manery ireo mpanao politika hikaroka vahaolana faran`izay haingana no mitranga ary manomboka efa miharihary fa tsy voafehy izy ireo. Porofo iray ny hetsika fizaram-bary tao amin`ny Lapan`ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny talata lasa teo. Maro ireo miaramila no tsy nanaraka baiko sy nitazam-potsiny ireo olona nisavoritaka tamin`ireo vary sy voamaina. Vokany, sahirana ireo mpikarakara ny hetsika nifehy ireo olona teny an-toerana. Ny tolona nezahan’ny depiote ho an`ny fanovana natao anefa dia ho fanomezana hasina ny Tafika ho andry fiarovana ny firenena sy ny andrim-panjakana. Efa arahan`ny mpitolona eny amin`ny kianjan`ny 13 mey maso akaiky ny fihetsiky ny fitondrana ankehitriny.